Okwu banyere ihu igwe na ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Okwu banyere oge
Nacho Morató | | Ihe
Site na mgbe ochie, ụmụ mmadụ na-ele elele elu igwe mgbe niile ka ha mara etu ihu igwe ga-adị ụbọchị ahụO nyegoro ya aka ịghọta etu ihu igwe ga-esi eme n'oge ahụ. Ọ bụ ezie na anyị nwere usoro amụma dị oke mma ugbu a, nke bụ eziokwu bụ na karịa ndị ọrụ ugbo niile ahapụbeghị agwa ochie na ahụike nke ịchọ mma.
Ga nke ọma n’ịkụ mkpụrụ osisi horticultural na-adabere na ikuku ịbụ nke na-adịwanye ma ọ bụ na-erughị ala, ma ọ bụghị ya, a ga-emebi ihe ọkụkụ niile. Oke udu mmiri ma ọ bụ oke mmiri ozuzo a na-atụghị anya ya nwere ike kpochapụ ọrụ otu afọ. Ma Idebe oge abụghị naanị ihe dị mkpa maka ogige ahụ, kamakwa maka akụkụ ndị ọzọ nke ndụ anyị.
Nke ukwuu nke mere na, na narị afọ ndị gara aga, kemgbe ọbịbịa nke Iso Christianityzọ Kraịst, ihe ịtụnanya dị iche iche malitere ịbịakọta ụbọchị ndị nsọ. Nke nta nke nta onye ọ bụla nwere ike ịmata ihe ihu igwe ga-abụ naanị site na ịge ha ntị: ndị bi na ndị na-arụ ọrụ n'ọhịa, na-elekọta akwụkwọ nri ha na osisi mkpụrụ osisi, kamakwa ụmụ anụmanụ. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịme ihe dị mkpa iji zere ọdachi.
Site nchoputa oge nile banyere mmeghachi omume di iche iche nye onodu di iche iche nke n’otù ebe nwere oge izu na, karisia, onwa nke ihe ndi di ndu bi n’ime ya, O nwewo ike ikpokọta ahịrịokwu ahịrịokwu nke ghọrọ, ihe dịka, akụkọ gbasara ihu igwe nke ndị mmadụ nkịtị.
Ọ bụ eziokwu na imirikiti ndị mmadụ bi ugbu a n'obodo, nke dị anya na ime obodo, mana nke bụ eziokwu bụ na nkebi ahịrịokwu ndị ahụ, ugbu a ghọrọ okwu ihu igwe nke onye ọ bụla na-amakarị ma ọ bụ onye nwere mmasị na ihu igwe ga-ama, bụ okwu na-ada ụda n'uche ọtụtụ ndị.
Anyị nwere ike inwe ọtụtụ ọkaibe usoro ịkọ ihu igwe, ma eleghị anya n'ọdịniihu na ihu igwe ga-enwe ike ịkọ amụma ziri ezi karịa, mana okwu ahụ ka ga-adị. Dị ka akụkụ nke oge nke ụmụ mmadụ na-enweghị kọmputa, kama ha chọrọ ịma ihe ihu igwe ga-eme.
Ke ikpehe emi anyị na-akpọkọta okwu ndị ama ama ama ama amaỌfọn, dabara nke ọma, anyị bi na mbara ala ebe ọnwa ọ bụla pụrụ iche. Nwee obi ụtọ na ha.
Okwu Kwuru Okwu
Okwu nke october
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Okwu banyere oge
Ndi geoengineering bu uzo mgbapu banyere mgbanwe ihu igwe?
Ajọ ifufe Irma na-aga n'ihu na-aga na North Florida, ụdị ya dabara na 1